Kuita nevakomana. Kugadzira maAvatar eKisimusi neInkscape | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, GNU/Linux, Free Software
Imwe yenzira dzekuparadzira yemahara uye yakavhurwa sosi software uyes dzidzisa vadiki kuti zvinonakidza sei kushandisait. Ndosaka tiri kuenda nemamwe mazano aunogona kuita navo mumazororo aya (kana ayo anouya, nekuti nemaatatari eKisimusi tatova nechinyakare.)
1 Chirongwa chekuita nevakomana
1.1 MaKisimusi avatari
Chirongwa chekuita nevakomana
Chirongwa chatiri kuzoshandisa muchirongwa ichi ndeche Inkscape. Inowanikwa yeWindows, Linux neMac, chishandiso chehunyanzvi, asi chiri nyore kushandisa pakushandisa vector mifananidzo. Vector mifananidzo ndeye yakasarudzika mhando yemifananidzo iyo, nekuda kwehunhu hwayo, inokutendera iwe kuti uchinje saizi yavo pasina kuita shanduko yemhando
Inkscape inosanganisirwa mu izvo zvinyorwa zveiyo huru Linux kugoverwa pamwe nekuwanikwa pazvitoro zveFlatPak neSnap.
Chinhu chekutanga chatinoda ndeye typeface inosanganisira zviratidzo zveKisimusi.iwe. Unogona kuwana zvimwe mu peji ino. Ini ndaishandisa inonzi Christmas3 iyo yemahara yekushandisa wega. Iwe unogona zvakare kushandisa yeKisimusi emojis iyo mamwe maGNOME uye KDE-akavakirwa ekuparadzira anosanganisira.
Rangarira kuti lmafonti anofanirwa kuiswa usati wavhura application yauri kuzoshanda nayo. Zvikasadaro hazvizozviona. Iyo yekumisikidza inoitwa nekusunungura iyo yakadzingwa faira uye kaviri-kudzvanya pane yega font.
Chinhu chechipiri chatinoda kuziva kuyerwa kweiyo avatar yatichagadzira. Izvo zvinotevera.
Iye zvino zvaunoziva zviyero, Vhura Inkscape uye enda kuFaira Gwaro Zvivakwa. Ikoko mune saizi tsika yaunosarudza px (pixels) seyuniti yechiyero uye sarudza yakakodzera. Ndiri kuzoshandisa 400 × 400.
Mune wizard iyi tinosarudza saizi uye chiyero cheyero.
Wobva wadzvanya pane iyo tebhu Grids uye pane bhatani Nyowani padyo neRectangular Grid. Vhara hwindo.
Sezvauchaona, hwindo rinoshanda diki kwazvo. Unogona kugadzirisa izvi kubva kumenu Wona Zoom Zoom In ..
Zvino dhonza denderedzwa nekusarudza chishandiso chinoenderana chinotora upamhi hwese hwindo. Tarisa mubhawa repamusoro kuti riine nharaunda yakafanana uye kuti mavambo nemagumo zviri 0.
Iyi denderedzwa yepasi ichashanda semucheto wekunze weavatar yedu.
Iwe unogona kusarudza iwo ruvara rwedenderedzwa nekudzvanya paruvara pendi. Nekudzvanya pamuseve kurudyi kwemavara iwe unogona kusarudza palettes akasiyana.
Dzokorora maitiro ekugadzira denderedzwa reiyo saizi, asi chinja ruvara. Bvisa huwandu hwakaenzana kubva kunharaunda X uye nharaunda Y.
Tinofanirwa kudhirowa denderedzwa repiri iro rinozove hwaro hwechiratidzo.
Wobva wadzvanya pa CTRL + SHIFT + A pakuve nechokwadi chekuti denderedzwa remukati rakanyatsoenderana. Isu tinoita izvi nekudzvanya pamifananidzo kuti ive panzvimbo yakatwasuka uye yakatwasuka inoenderana nePeji.
Hover pamusoro wedenderedzwa remukati uye tora-kurudyi pane Zadza uye Border. Mune sitiroko ruvara sarudza chena uye nesitiroko dhayamita yakafara mashanu pixels. Rangarira kuti iwe unogona kusarudza zviyero zvaunosarudza.
Kugadzirwa kwedenderedzwa remukati uko typography ichaenda.
Uchafanira kundiregerera nekusawirirana mune zvakatorwa. Inkscape muUbuntu Studio ine bhagi iyo inoita kuti iturike kana iwe uchinja mafonti uye ini ndaifanira kuishandisa muUbuntu.
Sarudza iyo typography chishandiso, dhonza bhokisi pese pese pachiratidziro wobva wadzvanya pakati payo ne pointer Sarudza hunhu hune chiratidzo chaunoda uye gadzirisa saizi. Dzvanya zvakare pa CTRL + SHIFT + A uye pamifananidzo kuti ive pakati uye yakatwasuka inoenderana neiyo peji.
Kusarudza font, chiratidzo uye saizi
Chinja iyo dhizaini nekudzvanya pane palette uye kutumira kunze kubva Faira kutumira kunze sePNG.
PNG Mufananidzo Export Dialog.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kuita nevakomana. Kugadzira maavatatisi eKisimusi neInkscape